ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေ ဒန့်သလွန်သီး စားလို့ရလား…………. - Hello Sayarwon
ဗိုက်ထဲက ကလေးလေး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျန်းကျန်းမာမာ ကြီးထွားလာစေဖို့ မေမေက အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသုံးဖို့လိုပါမယ်။ မေမေ နေ့စဉ် စားသုံးတဲ့အာဟာရမှာ သစ်သီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ အခြား အာဟာရဖြစ်တဲ့ စားစရာတွေ ပါဝင်နေဖို့ လိုပါမယ်။
ဒီနေ့တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ စားသုံးမယ်ဆိုရင် မေမေရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေမယ့် အသီးအနှံလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒန့်သလွန်သီးလေးအကြောင်း ပြောပြပေးမယ်နော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဒန့်သလွန်သီးစားတာ ဘေးကင်းရဲ့လား………
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဒန့်သလွန်သီးစားတာက ဘေးကင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒန့်သလွန်သီးကို သေချာဆေးကြောပြီး ကျက်နေအောင် ချက်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။ အခြား အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ စားစရာတွေလိုပဲ ဒန့်သလွန်သီးကလည်း သင့်တင့်တဲ့ ပမာဏ စားသုံးမယ်ဆိုရင် မေမေရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေမှာပါ။
ဒန့်ဒလွန်သီးမှာပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေက ဘာတွေများလဲ…………..
ဒန့်သလွန်သီးမှာ မေမေရော ဘေဘီလေးကိုပါ ကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါတွေကတော့
ဗီတာမင် B အုပ်စုတွေ
ဗီတာမင် C တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေ ဒန့်သလွန်သီးစားတဲ့အခါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေ ဒန့်သလွန်သီးစားတဲ့အခါ
Morning Sickness သက်သာစေတယ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေ အနေနဲ့ ဒန့်သလွန်သီးစားတဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အစောပိုင်းကာလမှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ ပျို့အန်တာကို သက်သာစေမှာပါ။ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျတာ၊ မူးဝေတာတွေကို သက်သာစေမှာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေအနေနဲ့ ဒန့်သလွန်သီး စားပေးတာက တက်ကြွ လန်းဆန်းနေစေမှာပါ။
ဘေဘီလေးမှာ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက် ကင်းစေတယ်
ဒန့်သလွန်သီးမှာ ဘေဘီလေးရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောမကြီး တည်ဆောက်ရာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ် ဖြစ်တဲ့ ဖောလိတ် ပါဝင်နေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖောလိတ် မပြည့်ဝမှုက ဘေဘီလေးမှာ ချို့ယွင်းချက် ပါလာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘေဘီလေး ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖောလိတ် ပြည့်ဝအောင် စားသုံးဖို့လိုပါမယ်။ ဒန့်သလွန်သီးက ဖောလိတ် ပါဝင်နေတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေနဲ့ အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
ဒန့်သလွန်သီးက သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဒန့်သလွန်သီးစားတာက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆီးချို မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒန့်သလွန်သီးမှာ အရိုးတွေကို သန်မာစေပြီး အရိုးသိပ်သည်းဆ ကောင်းမွန်စေတဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓာတ်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
သွေးအားနည်းရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်
သံဓာတ်အားနည်းတဲ့အခါ သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အဖြစ်များတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သံဓာတ်အားမနည်းစေဖို့နဲ့ သံဓာတ်အားနည်းမှုကြောင့် သွေးအားနည်း ရောဂါ မဖြစ်စေဖို့ဆိုရင် ဒန့်သလွန်သီး အပါအဝင် သံဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသုံးဖို့ လိုပါမယ်။
ရောဂါပိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးတယ်
ဒန့်သလွန်သီးက ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကိုယ်ခံအားက နည်းနေတာကြောင့် ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေက တော်တော်လေး မြင့်နေပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေ ကင်းဖို့ဆိုရင် ဒန့်သလွန်သီး စားပေးလို့ရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အမျိုးသမီးတော်တော်များများ ခံစားရတဲ့ ပြဿနာက ဝမ်းချုပ်တာပါ။ ဒီပြဿနာကင်းစေဖို့ဆိုရင် နေ့စဉ် စားသုံးတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ဒန့်သလွန်သီး ထည့်စားပေးပါ။ ဒါက ဝမ်းမှန်မှန်သွားစေပြီး ဝမ်းချုပ်တာကို သက်သာစေမှာပါ။
ဒန့်သလွန်သီးက သားအိမ်ကျုံ့ဆန့်မှုကို အားကောင်းစေပြီး မွေးဖွားချိန်မှာ နာကျင်မှုကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ မွေးဖွားရလွယ်ကူစေပြီး မွေးဖွားပြီးနောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
Consuming Drumstick (Shajan) During Pregnancy https://parenting.firstcry.com/articles/eating-drumstick-shajan-during-pregnancy-health-benefits-side-effects-and-more/ Accessed Date 11 May 2020
Can You Eat Drumstick During Pregnancy? https://www.momjunction.com/articles/drumstick-during-pregnancy_00380013/ Accessed Date 11 May 2020